Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Zakiya Xuseen Axmed ayaa ka hadashay qarixii Ismaadaaminta ahaa ee khasaaraha dhaliyay kaas oo Maanta barqadii ka dhacay Bar-koontorool oo Ciidamada dowladda ku leeyihiin agagaarka Taalada Daljirka Daahsoon ee degmada boondheere.
Waxa ay sheegtay in qaraxaasi ay ciidamada Amniga fashilyeen,isla markaana uu ahaa mid lagu weeraray Koontoroolka ciidamada oo ah mid laga ilaaliyo Madaxtooyada Soomaaliya,isla markaana gawaarida lagu hubiyo.
“Ciidanka Amniga oo bar koontarool uga hortagay kuna fashiliyay qarax lagu beegsanayay saldhig uu ciidanka amnigu leeyahay. Inta aanu xaqiijinay waxaa qaraxa ku dhintay 5 qof halka 11 kalana ku dhaawacmeen. Intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacantay Allah ha siiyo caafimaad taam ah ayay tiri Zakiye Xuseen Axmed
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada qaraxaas,iyaga oo sheegay in ay la beegsadeen gaadiid ay wateen la saaraakiil katirsan dowladda Federaalka iyo xidhibaanno,isla markaana ay ku dileen Saraakiil Ciidan.
← Puntland iyo Galmudug oo soo saaray Warsaxaafadeed (AKHRISO) → Wasiirkii hore ee Arrimaha dibada oo ku dhintay Qaraxii Muqdisho